Tareenka ayaa ka soo muuqday safka hore | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraTareen ayaa u muuqday muuqaal
23 / 05 / 2014 06 Ankara, 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
Tareenka wuxuu u muuqday jaranjarooyinka: Tan iyo 1943, xukuumadda 23 waxay bilaabatay inay tiriso mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Ankara-Istanbul, kaasoo ahaa mid aan lagaranaynin 32; 29 October waxaa loo qorsheeyay inuu furmo 2014. Marka waa maxay astaamaha xariiqda, sida iskuxiridda magalooyinka loo aasaasay? Halkee waxaa la qorsheeyey khadadka cusub ee Turkey? Muxuu mashruucu u soo baxay markii ugu horeysay 71 sano kahor? Maxaysan dawlada AKP u isticmaalin qadka sii maraya Wadada Ayaş, halkaas oo 100 ay ku maalgelisay malaayiin rodol?
Tareenka xawaaraha sare, oo yareyn doona safarka u dhexeeya Ankara iyo Istanbul seddex saacadood gudahood, waa dhowyahay. Tareenka, oo loo adeegsaday inta udhaxeysa Ankara iyo Eskişehir ku dhawaad ​​shan sano, waxaa loo qorsheeyay in lagu casriyeeyo taariikhda 29 Oktoobar 2014. Wadayaasha tijaabada ayaa durba bilaabay. Sidii oo kale, ayaa su'aalaha kor loo qaaday. Waxaa jira waxyaabo badan oo la yaabay oo ka yimid astaamaha khadka tareenka xawaaraha sare illaa isku xirka miyiga, sida khadadka cusubi isu beddelaan bilowga taariikhda mashruuca oo loo wareejiyo dowlado kala duwan waqtiga, iyo sababaha dib u dhaca.
Joogsi ugu dambeysay Pendik
Khaladka ugu layaabka badan kahor; Fiiri tareenka xawaaraha sare ku socda (YHT) ee u dhexeeya Ankara iyo Istanbul. Tareenada xawaaraha dheereeya ee ka tagaya Ankara waxay gaari doonaan Pendik seddex saacadood gudahood. Pendik wuxuu noqon doonaa joogsiga ugu dambeeya ka dib markii laga gudbo sagaal joogsi oo laga dhex abuuray labada magaalo wadar dhan kiiloomitir 533. Tareenka wuxuu gaari doonaa meesha ugu dambeysa isaga oo maraya Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit iyo Gebze. Mar dambe, khadka ku yaal magaalada Pendik waxaa lagu dhexgalidoonaa Marmaray oo ka socota Kadıköy-Ayrılıkçeşme. Sidan, rakaab u gudbay Sirkeci, halkaasna uga raacaya khadka magaalada Halkalıilaa taraafik. Markaa, gaadiid aan kala go 'lahayn oo ka tagaya Yurub oo Aasiya jooga ayaa la bixin doonaa. Iyadoo Gebze Halkalı Waxaa jiri doona wadar ahaan xarumaha 42 oo ay ku jiraan seddex saldhig oo qoto dheer (Üsküdar, Sirkeci iyo Yenikapı). Qiyaastii kiiloomitir 76.5 oo dabcan daboolka laga qaadi doono daqiiqadaha 105. 29 ee Marmaray-Kazlıçeşme qaybta ka baxsan Marmaray Bishii Oktoobar howlgalka tareenka ee 2013 ayaa durbaba bilaabay; khadka oo dhan wuxuu ku dhammeysan doonaa 2015 oo leh isku xirnaan. Si kale haddii loo dhigo, kuwa leh dhibaatooyinka ka saarida tareenka magaalada hareeraheeda ah ee dhanka Anatolian waa inay sugaan sanad kale.
71 riyada sanadlaha ah
Sidaas-xawaaraha tareenada ee Turkey, sida Xusuuso soo noqnoqda Ra'iisul Wasaare Recep Tayyip Erdogan ayaa, oo yeynan aasaaska mashruuca, furitaanka a gebi ahaanba yahay mashruuca AKP ee? Turkey waa ku filan si ay caleenta taariikhda jawaab tareenada ee dhibaatada. quudhin Turkey ee tareen-xawaaraha sare bilaabmaa 71 sano ka hor. 1943, tunnel laga furay Ayaş waxaa la qorsheeyay in lagu dhimo laba saacadood iyo badh inta udhaxeysa Ankara iyo Istanbul, iyo mashaariicda ayaa la diyaariyey daraasadna waxaa loo sameeyaa ujeedokan. Si kastaba ha noqotee, Xisbiga Dimuqraadiga, oo xukunka la wareegay dhamaadka dadaalladaas, ayaan bilaabin wax maal gelin ah sababtuna tahay xaaladda gargaarka Mareykanka. Intaa waxaa dheer, maalgashiga waddada tareenka ee waddankeenu muddo dheer xoogga saarayay dooddi fikradeed. Ugu dambeyntiina bilowga mashruuca waxaa bixisa dowladda Demirel ee 30, kadib nasiin ku dhowaad 1975 sano. 1976, Raiisul Wasaare Süleyman Demirel oo hal dhinac ah iyo Necmettin Erbakan, oo ah hogaamiyaha xukunka MSP dhinaca kale, waxay aasaaseen aasaaska Ayaş Tunnel sidaas darteedna khadka tareenka xawaare sare ku socda. Mashruucan, oo Bangiga Adduunku uusan oggolaanin, ayaa ujeedkiisu yahay in lagu xaqiijiyo dowladda Qaranka Front oo leh kheyraad u gaar ah. Mashruucan, oo loo qorsheeyay in la dhammeeyo muddo toddobo sano ah, ayaa xiran dowlad buuxda oo ah 23 iyo wasiir 32 weligiis ilaa iyo markaas.
Inqilaab militari oo tareenka degdega ah ku socda
Mar haddii mashruucu bilaabmay, carqaladda koowaad waxaa dejiyey afgembigii militari ee 1980. Kadib kala guurka xukunka rayidka, Raiisul wasaare Turgut Özal wuxuu joojiyay dhismaha Wadada Ayaş asagoo salka ku haya “Tareenka waa shaqada wadamada shuuciyada mana uu qoondeeyo dhaqaalaha mashruuca. Dhankaas, halkii laga bilaabi lahaa tareeno xawaare sare leh, dhismaha wadada weyn ee udhaxeysa Ankara iyo Istanbul ayaa bilaabaneysa. Mashruuca ayaa mar kale loo dayacay si loo gaaro himilooyinkiisa. Wixii kabadan sanadihii 10, daraasadihii ayaa dib loo bilaabay daraasado cusubna waa loo baahan yahay in la cusbooneysiyo. Warbixinta, oo ay diyaarisay Wakaaladda Iskaashiga Caalamiga ah ee Japan (JICA), ayaa isbarbar dhigeysa dayactirka heerka sare ee qadka jira iyo dhismaha qadka xawaaraha cusub, kaas oo sidoo kale ku jira daarta Ayaş, waxaana ay leedahay dhismaha dariiqa xawaaraha oo leh xawaare ugu badan oo ah kiiloo mitir 260 saacadiiba iyo waqti safar laba saacadood iyo badh ah. . Intaa waxaa dheer, mashruucu wuxuu aad uga habboon yahay dayactirka khadka maaliyadeed ee jira. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo ay jiraan dadaalladan oo dhan, xitaa cidina looma adeegsan mashruucan. In kasta oo Demirel uu isku dayo inuu mar kale sheegto mashruuceeda 1991, Suuragal maahan in la dhammaystiro Ayaş Tunnel, kaas oo hirgelin doona tareenka xawaare ku socda ee Ankara-Istanbul.
Ka tirtir mashruuc cusub bilowga
Sanado badan ayaa laga soo gudbay wadahadalo ku saabsan in Dabaqa 'Ayaş Tunnel' uu yahay dhulgariir u adkaysan kara Intii lagu guda jiray maamulkii DSP-MHP-ANAP, Wasiirka Gaadiidka MHP Oktay Vural wuxuu doorbidayaa mashruuca horumarinta Alarko Group halkii uu ka ahaan lahaa Wadada Ayaş. Xaqiiqdii, mashruuca dhaqancelinta, Raiisel wasaaraha muddada Bülent Ecevit, Ayaş Tunnel, sida soo bandhigida iyo wararka la ansixiyay ayaa ah wax laga xishoodo. 2003, AKP wuxuu ku imanayaa awood inta lagu gudajiro marxaladda qandaraaska. Qandaraaska waxaa la qabtay muddadii dowladdani jirtay. Saddexda hindise waxaa lagu abaal mariyaa urur ay wadaagaan saddex shirkadood, Jabaan iyo laba shirkadood oo Turki ah. Ilaa taariikhdaas, 628 milyan oo rodol oo xabashi la aasay, 100 milyan oo gini oo dheeraad ah Ayaş Tunnel project ayaa la dhameystiri doonaa haddii qoondeynta la dayaco. Mashruuca 'Ankara-Istanbul' cusub ee tareenka xawaare sare leh (YHT), oo lagu qiyaasay inuu ku kacayo $ 2004 bilyan wadarta guud, ayaa loo qoondeeyay 300 milyan liras miisaaniyadda 1.6 bedelkeeda. 9 May Aasaaska 2004 ayaa la dhigay oo dhismaha mashruuca cusub ayaa runtii la bilaabay. Wadada Ankara-Istanbul YHT, wadada waxay ka gudubtaa Eskişehir 13 Maarso 2009'da ayaa shaqeyneysa. Waxaa ku xusan khadadka Ankara-Konya ee 24 August 2011 iyo Eskişehir-Konya Khadadka 23 March. Hadda khadka Ankara-Istanbul ayaa dhammaaday.
Ayas miyuusan dulsaar dul saaranayn? Waa sidee xaaladdu qadka Bursa-Izmir?
Sida laga soo xigtay saraakiisha TCDD, qadka Ayaş lama keydin; kaliya ka dhigaysa inay horumar si tartiib ah. Xaqiiqdii, xoogaa lacag ah ayaa loo qoondeyn doonaa jidka Ayaş xilli miisaaniyad kasta (laakiin ma jirin lacag loo qoondeeyay sannadihii la soo dhaafay). Waxay yiraahdaan, ulaşmak Waxaa ugu wanaagsan in la gaaro Istanbul illaa Ayaş, laakiin waxaa jira howlo kale oo wadada Eskişehir ah Konya Khadkaani sidoo kale wuxuu ka faa'iideystaa tareenka xawaaraha sare leh ee Konya. Habka soo socda, Wadooyinka Bursa iyo Izmir waxaa lagu xiri doonaa hal xidid. line Konya ilaa 2023 Antalya iyo Mersin ilaa saraakiisha uzayacak.tcdd, sanadka ah ee abuuritaanka Republic of Turkey xnumx'ünc qorshaha xnumx'ekad ee tareenka, taas oo ka dhigtay kiiska. Waqtigan xaadirka ah, saamiyada tareenka xamuulka qaada waa xNUMX boqolkiiba, iyo safarka rakaabka ayaa ah boqolleyda 100. Qiimayaashan ayaa loogu talagalay in lagu kordhiyo 2023 ee rakaabka rakaabka ah iyo 5 ee xamuulka xamuulka xNUMX. Lacagta lagu isticmaalayo howshan waxaa loo xisaabiyaa sida "2 billion dollars".
628 MILLION TL KUNA FOOT TUNNEL
Waxaa la sheegtey in hal bilyan doolar lagu kharash gareeyay mashruuca Ayaş Tunnel, oo aan sii wadin inta udhaxeysa Sincan iyo Ayaş. Xisaabinta Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta waxay muujineysaa in qarashku yahay 628 million TL. Sida ku xusan qorshihii hore, dhismaha tunnel-ka, oo ah qeybta ugu muhiimsan ee tareenka xawaaraha dheereeya ee Ankara-Istanbul, ayaa istaagay ka dib markii ay qodeen xNUMX kun oo mitir oo 8 la dhammeeyay. Sababtoo ah tunnelka waxaa laga helay dabaqyada ciyaarta. Habka 'Austrian New' wuxuu ogolaaday in la fidiyo dhererka tunnel-ka, 78 kun 7 mitir, 830 kun oo 10 mitir ayaa kordhay. Isbeddelkani wuxuu kor u qaaday qiimaha boqolkiiba 460 boqolkiiba qaddarka daahfurka. Xaqiiqdii, markii tunnelka la dhammaystiray, kharashka haray hadduusan sarrayn. Sababtoo ah dariiqa ugu habboon, sida ka muuqata khariidada, ayaa halkan joogay. Si kastaba ha noqotee, hadda Ayaş Tunnel wuxuu u eg yahay goob dhismo oo laga tagay. Calaamadaha hufan, aqoon-isweydaarsiga iyo hangaradu waa burbureen. Gawaarida gawaarida dagaalka iyo wargeysyada hangaraashka ayaa looga haray inay qudhmaan. Inta badan biraha waa biraha dhulka hoostiisa. Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay rabtaa inay u isticmaasho tunnel sidii bakhaar keyd ah oo qabow, "Lacagtan badan waxay u ahayd bakhaarka?"
KISSADAN PAMUKOVA'ya dhicitaan wadaag!
'Mashruuca Tareenka Dardargelinta' iyo 2004 Shilka Pamukova, oo sababay geerida 41, wali wuxuu kujiraa xusuusta. Su’aasha ah “Injineerkii tareenka xawaaraha kiiloomitir ee 132 kiiloomitir ma yahay dambiile, mise maamulka ayaa siiya xawaare siinaya bilawga khadka jira?” Ma helin jawaab cad. Laakiin waxaan ognahay waa in mashruuca tareenka xawaaraha-xawaare sare ku socday uu hore u soo maray waxyaabo qaar ka hor. Sannadka, 1952… Maamulka TCDD wuxuu ka iibsaday tareeno labo-injineer Jarmalka. Ilaa sanadka 1954'e wuxuu kordhiyay tirada 18. Tareennada laga soo iibsaday MAN waxay ka koobnaayeen saddex gaadhi oo waran. Dabcan, aad bay uga dambeeyeen tikniyoolajiyadda hadda jirta. Waxay bilaabeen inay ka shaqeeyaan khadka Ankara-Istanbul. Waqtigaas tareenka wuxuu dardar geliyey kiiloomitir 140. Haa, uma aqrin khalad, waxay sameysay xawaaraha masaafada dhan ee 140. Markii hore wax walba si hagaagsan ayey u socdeen i. Si kastaba ha noqotee, laba bilood ka dib, faasaskii meelihii la dumiyey ayaa dillaacay. Markiiba Jarmalka ayaa loo yeedhay oo dib-u-eegis lagu bilaabay. Dhanka kale, in kasta oo dillaacyada faasaska dillaacyadu ahaayeen, biraha waxaa lagu arkay inay waxyeello yihiin. Baadhitaano dheer kadib, waxa sababay burburka. Miisaanka dhaqdhaqaaqayaashu wuxuu ahaa 15.5. Si kastaba ha noqotee, heshiiska lala galay Jarmalka, miisaanka waxaa loo go'aamiyay inuu yahay 13.5 tan. Dheeraadka 2 tonne wuxuu sababay dillaac ku dhaca xawaaraha kiiloomitir 140 kilomitir, kaasoo u keenaya rakaabka qarka masiibada. Markii xaaladda la fahmay, Kamil Necati Bey, oo ah madaxa wefdiga iibsaday tareenada, ayaa is casilay isla markiiba. In kasta oo aysan shilal dhicin, haddana dhaqankii sharafta lahaa ee madaxweynaha waxaa aqbalay maamulku wakhtigaas. Kadibna culeyska taayirka ee tareenka ayaa hoos loo dhigay xawaarahana hoos ayaa loo dhigay. Aan ku laabanno shilka Pamukova. In kasta oo uusan jirin isbeddel xag-jir ah, tareennada waxaa lagu amrey inay xawaare ku socdaan. Intaa waxaa dheer, aagagga loo adeegsaday wakhtigaas ma ahayn xNUMX tan, laakiin waxay ahaayeen 13.5 tan. Farqi aad u fara badan ayaa u dhexeeya 'tareenka xawaaraha sare' iyo 'tareenka xawaaraha ku socda', gaar ahaan wadada, laakiin taasi waa sida gacanta koowaad ee Raiisel wasaare Erdogan uu bilaabay. Markaas gacmaha reer Spanish way ruxeen, bilowga tareenka xawaaraha sare hada lasiiyay.
ANKARA-ISTANBUL HIGH SPEED MASHRUUC KUNTU MILESTONES
Ankara-Istanbul (Pendik): kiiloomitir 533
Eskisehir-Istanbul (Pendik): kiiloomitir 266
1- Eskisehir-Inonu: Kiiloomitir 30
2- Inonu-Kosekoy: kiiloomitir 124
(Cuntada caadiga ah ee loo yaqaan "HilT + 36 kilomitir")
3- Köseköy-Gebze: magaalooyin kale
(Lagu sameeyay lacagta IPA)
4- Gebze-Pendik: kiiloomitir u jira 20
(Wajahadda Mashruuca Marmaray)
Wax-soo-saarka inta uu ku egyahay mashruuca:
Dhererka tunka Ankara-Eskişehir (xirmooyinka 1): Mitirrada 470
Dhererka Ankara-Eskişehir viaduct (xirmooyinka 4): kiiloomitir 4
Dhererka tunkilada Eskişehir-Köseköy (xirmooyinka 34): mitir 58 kiiloomitir 988
Dhererka tunnel laga furay Eskişehir-Köseköy (xirmooyinka 27): mitir 37 Mitir
Isugeynta dhererka viaduct (22 kumbiyuutarada): mitir 10 kiiloomitir 230
Wadarta tirada xad-dhaafyada: 13
Wadarta guud ee marinnada: 50
Wadarta tirada grilles: 180
Waxaa jira xawaareyaasha 560, taxanaha korantada ee 179 iyo naaftada iyo sideed tareen oo xawaare sare ku socda wadooyinka tareenka. Tirada gawaarida rakaabka ah waa 997 iyo tirada gawaarida xamuulka ah waa 19 kun 690. Wadarta xNUMX kun oo kiiloomitir oo tareennada ah ayaa leh xariiq xariijin u leh boqolkiiba 11 boqolkiiba ku dhawaad ​​kala badhkoodna waa la cusboonaysiiyay. Waqtigan xaadirka ah khadadkaan waa saldhigga 28 iyo saldhigga, 410 kun oo 3 iskutallaab ah. Cusboonaysiinta xarunta 555 waa la dhammeeyay. Aan u nimaadno saadaasha TCDD ee 270: dhererka jidadka tareenka waxay kor ugu kici doonaan xNUMX kun oo 2023 kiiloomitir iyo xNUMX kun oo 22 kiiloomitir waxay noqon doontaa khadka tareenka xawaare sare. Tirada gawaarida xamuulka ayaa kor u kici doona 504, tirada gawaarida rakaabka ee loo yaqaan '6' iyo tareenka xawaaraha sare leh ee loo dejiyay 792. Marka, inta badan rakaabka rakaabka waxaa lagu bixin doonaa tareen xawaare sare leh.
Hadafku waa inuu galo dunida ugu horreysa ee 10
Mid ka mid ah bartilmaameedka dowladda ee 2023 waa in lagu tababaro 488 milyan oo rakaab ah sanadkiiba safarka 70 maalin kasta. qorshayaasha rail-xawaaraha sare ee Turkiga, gaadiidka, badda iyo arrimaha Isgaarsiinta Wasiirka Lutfi Elvan, waxaan weydiiyey in.
Immisa agab ayaa loo wareejiyay waaxda tareenka maanta?
Intii lagu jiray sannadihii 2003-2013, qiyaastii 32.5 bilyan TL ayaa loo wareejiyay waaxda. Sida sanadihii hore ee Jamhuuriyadda, waxaan dhisi doonnaa khadka tareenka ee 172 kiilomitir oo kilomitir ah sannad walba ololaha dhismaha waddo-tareenka ee aan bilownay.
Giraanta YHT waxaa lagu sameeyay saddexagalka Eskişehir - Ankara - Konya. Maxaa ku beddelay xariiqda xudunta u ah?
Waa suurtagal in la kala saaro nolosha Ankara, Eskişehir iyo Konya oo ah halka tareenka xawaaraha ku socda uu ka bilaabmay iyo nidaamka gaadiidka ee waddankeenna sidii ka hor iyo ka gadaal markii loo yaqaan 'YHT'. Qeybta gaadiidka tareenka, oo ah boqolkiiba 8 ee khadka Ankara-Eskişehir, ayaa kordhay boqolkiiba 72. Xiriirinta tareenka ee loo yaqaan 'YHT' iyo iskuxirka tareenka ee isku xira Kütahya iyo Afyonkarahisar, YHT iyo iskuxirka baska ee taga Bursa oo ay weheliso waqtiga safarka gadiidka ayaa si weyn hoos ugu dhacday. Heerka safarka ayaa sidoo kale bilaabay inuu kordho. In Wehliyaha 200 halka safraya Europe, tiradaasi in Turkey 20. Sababaha aad ula safraysid YHT way kala duwan yihiin. Markii hore, 15 wuxuu ahaa boqolkiiba safarka ujeeddooyinka dalxiiska, laakiin boqolleydan waxay u kacday 30. Maaddaama ay suurta gal tahay in lagula safro YHT, shaqada, waxbarashada iyo wixii la mid ah. Sababaha, halkii aad ka guuri lahayd guriga, socodsiinta maalinlaha / imaatinka ayaa bilaabay in la doorbido. Tani waxay wax ku kordhisay midnimada qoyska iyo miisaaniyaddooda. Dhaqanka, farshaxanka iyo ururada isboortiga, oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee magaalaynta, waxay sidoo kale ku korodhay YHT. Gaar ahaan dhalinyaradu waxay ogaadaan magaalooyin leh YHTs. Way fududaatay in la gaadho Badda Mediterranean-ka kana timaado Ankara; Laga soo bilaabo Konya ilaa Karaman iyo Eregli YHT oo lagu daray tareenka, oo lagu daray Antalya iyo Alanya YHT iyo iskuxirka baska ayaa la siiyaa. Waqtiga safarka ee udhaxeeya Konya iyo Eskişehir, oo ahaa shan ama lix saacadood oo bas ah, waxaa loo yareeyay laba saacadood. Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in YHTs ay ka samayso xaafadaha midba midka kale gudahood xadka xNUMX kilomitir.
2023 milyan oo rakaab ah oo ku sugan 70 Markii la dhammeeyo, ma nooga sheegi kartaa tirada rakaabka loo qorsheeyay in lagu raro khadadka YHT?
Iyada oo la hirgalinayo mashaariicda Ankara - Istanbul, Ankara - Izmir, Ankara - Sivas iyo Bilecik - Bursa, gobolka 46 oo ay wadarta guud ee dadka loo yaqaan '36', oo daboola boqolkiiba 15 boqolkiiba dadweynaha dalka, ayaa lagu xiri doonaa tareenka xawaaraha sare. 2023's bartilmaamed nambarada rakaabka ee sanadlaha ah; 17.7 milyan inta u dhaxaysa Ankara - Istanbul, 4 milyan inta u dhaxaysa Konya - khadka Istanbul, 1.8 milyan oo u dhexeeya Sivas - Ankara, 2.6 milyan oo ku yaal Sivas - khadka Istanbul, 3 milyan oo ku yaal Bursa - khadka Ankara, 3.5 milyan oo u dhexeeya Bursa - khadka Istanbul, 6 milyan oo u dhexeeya Ankara - Izmir. Marka khadadka kale ee la qorsheeyay la dhammaystiro, saadaasha rakaabka ee 2023 YHT waxay noqon doontaa sannad kasta rakaab 488 milyan oo rakaab ah oo raacaya socdaalka 70 maalin kasta.
Ma tareenno lagu shaqeyn doonaa khadad xawaare sare leh?
Hawlgallada tareenka xawaare sare leh waxay u baahan yihiin kaabayaal iyo tareenno ku habboon xNUMX kiilo mitir saacaddii. 250-tareenka xawaaraha sare leh ayaa la siiyay si loogu isticmaalo khadadka tareenka xawaaraha-xawaaraha sare ee la furay ilaa maanta. Intaa waxaa sii dheer, mid ka mid ah toddobada qaybood oo awood u leh dardar-gelinta kiiloomitir 12 saacaddiiba ayaa la iibsaday, lix ka mid ah ay ku socdaan dhismayaal.
sii wadaan in ay dhisaan khadadka-xawaaraha sare iyo xadiidka xawaaraha sare ee geliyey hawlgalka marka, sida miis in nidaamka gaadiidka ee Turkey bixi doona?
Tareenka ma ahan oo keliya inuu jecel yahay, laakiin wuxuu sidoo kale noqday habka ugu wanaagsan ee gaadiidka. Xariiqda udub-dhexaadka ah ee loo yaqaan 'YHT line' waxay ka bilaabmaysaa galbeedka ilaa bari, woqooyi ilaa koonfur. Joogtada xiga ee tareenka xawaaraha sare wuxuu noqon doonaa Sivas, Bursa, Izmir. Dhismaha xariiqyadan ayaa sii socota. Sidoo kale bariga YHT'ler Erzincan ee bariga, Konya - Karaman - Mersin - Adana - Osmaniye oo dhanka koonfureed ah iyada oo loo marayo Gaziantep iyo Sanliurfa ayaa gaari doona. Marka la soo koobo, ilaa 2023; Gaadhista dhererka wadarta ah ee 3 kun kilomitir oo tareenka ah iyada oo la samaynayo 500 kun oo kilomitir tareenka oo ay ku jiraan 8 kun 500 kiiloomitir tareen xawaare sare leh, 13 kun oo kiloomitir xNUMX kiiloomitir xawaare degdeg ah iyo kun kilomitir tareenka caadiga ah; cusboonaysiinta dariiqa oo dhan, dhammaystirka casriyeynta; Waxaan hiigsaneynaa inaan xaqiijino mashruuca tareenka qaranka oo aan kordhinno saamiga gaadiidka xadiidka ilaa 25 ee rakaabka iyo 10 xamuul. Hadafkayagu waa inaan ka midnoqonaa wadamada ugu horreeya adduunka ee 15 ee qaybta tareenka.
Mareegaha Muuqaalka Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare
Dhammaadkii Tunnel ee Metro Station ee Keçiören
Badda ayaa ugu dambeyntii soo muuqatay, Marmaray wuxuu diyaar u yahay furitaanka
Iftiin muuqda 7 Kilometers Tunnel Straw
In iftiinka tunnel dheer Turkey ayaa u muuqday YHT
3. buundada ayaa ka muuqatay meel bannaan
Iftiin ayaa ka muuqday Tunniga Akyazi
Iftiin ayaa ka muuqda Tunnel Dabka
Muuqaal laga arkay Malatya Karahan Tunnel
Iftiin ayaa ka muuqda Tunnelka labaad ee Göcek
"Iftiin Dheer" Waxay soo ifbaxeysaa Madaaradda Nadirdere
Ankara - tareenka xawaaraha sare ee Istanbul
Wadada Wadada Ankara iyo Istanbul
Mashruuca Ayas Tunnel
Mashruuca Tareenka Degdega ah
Tareenada la cusbooneysiiyay ee Faransiisku uma qalmin mashaariicda
5. Astaamaha Badbaadada Gaadiidka Waddooyinka iyo Bandhiga